ARTHUR CHATTO ကဘယ်သူလဲ။ SAM CHATTO ကဘယ်သူလဲ။ ရာဇပလ္လင်တော်သို့တန်းရောက်သောမင်းသား - သတင်း
Chatto ညီအစ်ကိုများကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်း။ ပူပြင်းပြီးငယ်ရွယ်သောတော်ဝင်လူငယ်များသည်စကားပြောခြင်းကိုမရပ်နိုင်ပါ
ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေကတော်ဝင်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာ Sam နဲ့ Arthur Chatto ကိုတွေ့ခဲ့ရပြီး၊ 'Hellooooo, အဲ့ဒီတော်ဝင်တွေဟာဘယ်သူတွေပဲ။ ဒီနှစ်ခုကိုလူမြင်ကွင်းမှာလူတိုင်းပြိုကွဲစေတယ်လို့ဆိုကြပါစို့။
- Han x (@hxnnahwright_) မေလ 19, 2018
ဒီစုံတွဲဟာဘုရင်မရဲ့နှမတော်မင်းသမီးမာဂရက်နဲ့သူမခင်ပွန်းဟောင်းအန်တိုနီအမ်းစထရောင်း - ဂျွန်၊ သူတို့ကစကော့တလန်ရှိ Edinburgh တက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားများလည်းဖြစ်သည်။
မနေ့ကလက်ထပ်ပွဲဟာချစ်ခြင်း၊ နွေးထွေးခြင်း၊ ငါ Meghan နှင့် Harry ကိုတစ်သက်တာပျော်ရွှင်စေလိုပြီးကျွန်ုပ်အတွင်း၌ရှိနေသောချစ်ခြင်းမေတ္တာအချို့ကိုမျှဝေချင်သည်။ ဒါဆိုမင်းကိုချစ်လားချစ်လား (အထူးသဖြင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသို့မဟုတ်ပလူတိုနီယန်) သူတို့ကိုဘာကြောင့်အထူးကြိုက်ရတာလဲဆိုတာသူတို့ကိုအသိပေးပါ first ငါအရင်သွားမယ်။ @artchatto မင်းကိုမင်းကိုချစ်တယ် (မင်းငါ့ကိုအရမ်းချစ်တယ်လို့မင်းငါ့ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလား) Love, ဆမ် x #LETTHELOVEFLOW #ALLYOUNEEDISLOVE #LOVEABOVEALL
မျှဝေသည် ဆမ်ချတ်တို 3:55 pm တွင် PDT မှာမေလ 20, 2018 ရက်တွင် (@samchatto)
မျှဝေသည် အာသာချတ်တို ?? 7:49 pm တွင် PDT မှာမေလ 20, 2018 ရက်တွင် (@artchatto)
Arthur Chatto ကဘယ်သူလဲ။
အာသာချတ်တိုသည် ၁၈ နှစ်အရွယ်ရှိတော်ဝင်မိသားစုနှင့်တော်ဝင်မိသားစု၏အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီးအက်ဒီဘာ့ဂ်တက္ကသိုလ်မှအနုပညာဆိုင်ရာလတ်ဆတ်သောသမိုင်းဖြစ်သည်။
မျှဝေသည် အာသာချတ်တို ?? 7:00 pm တွင် PDT မှာဇူလိုင်လ 27, 2017 ရက်တွင် (@artchatto)
ဘုရင်မကြီး၏တော်ဝင်တူတော်နှင့် Lady Sarah Chatto ၏သားအာသာသည် Instagram တွင် ၇၈ ယောက်နောက်လိုက်များရှိပြီးအပန်းဖြေခြင်း၊ အာတိတ်ရေငုပ်ခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်းနှင့်တီးမှုတ်ခြင်းများကိုနှစ်သက်သည်။
သူသည်ယခင်ကဘုရင်မရထားကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် Order of The British Empire တွင်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။
Arthur Chatto မှမျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု ?? (@artchatto) 11:59 pm တွင် PST မှာနိုဝင်ဘာ 7, 2017 ရက်တွင်
သူသည်အခြားမည်သည့်ကျောင်းသားနှင့်မဆိုထွက်ခွာသွားပြီး Reg ပေါ်ရှိ Sinners ကဲ့သို့ကလပ်များသို့သွားသည်။ ကောလာဟလဆိုသောအချက်မှာသူသည် 'သူ့ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိမိန်းကလေးငယ်များ' ၏မပါဘဲဘာမှမလုပ်နိုင်ပါ။
မျှဝေသည် အာသာချတ်တို ?? 2:56 pm တွင် PDT မှာအောက်တိုဘာ 21, 2017 ရက်တွင် (@artchatto)
အကယ်၍ Arthur ရှိကြောင်းသူတို့သိလျှင်လူများသည်အဖြစ်အပျက်များကိုရင်ဆိုင်ကြရသည်။
ငါ BJ ဘယ်လိုပေးသလဲ
Arthur Chatto မှမျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု ?? (@artchatto) 1:00 pm တွင် PDT မှာအောက်တိုဘာ 27, 2017 ရက်တွင်
အာသာသည်ပြီးခဲ့သည့်နွေရာသီကအီတန်မှဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ ထိုတွင်သူသည်တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်ပေါင်းစည်းခဲ့သည်။ ပြီးတော့တက္ကသိုလ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူဟာနောက်ဆုံးမှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေထဲ ၀ င်လာမယ်လို့ယူဆရပါတယ်
သူသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်ရှိသောတော်ဝင်မိသားစုများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ မင်းကြည့်လို့ရတယ် အများကြီး အဲဒီမှာအပေါ်သူ၏။
ပြီးတော့သူသိတဲ့အတိုင်းသူဟာသူနဲ့မရင်းနှီးတော့ဘူး။ ဒါကြောင့်ဟယ်ရီနဲ့ Meghan ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်စိတ်မပျက်ပါနဲ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းလက်ထပ်ဖို့မျှော်လင့်နိုင်သေးတဲ့ငယ်ရွယ်ပြီးတစ် ဦး တည်းသောတော်ဝင်မင်းသမီးများရှိနေလို့ပါပဲ။
Sam Chatto ကဘယ်သူလဲ။
Sam Chatto သည် Edinburgh တက္ကသိုလ်မှစတုတ္ထနှစ်သမိုင်းအနုပညာကျောင်းသားဖြစ်ပြီးတော် ၀ င်မိသားစုဝင်ဖြစ်သည်။
ဤနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သည်ကျွန်ုပ်၏အပင်များကိုကျွေးမွေးနေသလား။ နှင့်နောက်ကျငါ့ဝိညာဉ်ကိုအစာကျွေး !! ပို့လား ချစ်လား လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ယနေ့ည! ဘယ်ကိုပို့ရမလဲပြောပြပါ။ အချစ်, Sam? xx #lovetrain #allyouneedislove #iseeyou #iloveyou
မျှဝေသည် ဆမ်ချတ်တို 11:35 pm တွင် PDT မှာAprပြီ 24, 2018 ရက်တွင် (@samchatto)
အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ်ရှိသူသည်ရာဇ ၀ င်တွင် ၂၂ ယောက်မြောက်မင်းဖြစ်သည်။
tinder အပေါ်တစ်စုံတစ် ဦး ကနှုတ်ဆက်ဖို့ဘယ်လို
သူရောက်နေပြီ ဆိုဖီပိုက်နှင့်ဆက်ဆံရေးအတွက် ပြီးခဲ့သည့်သုံးနှစ်သည်။
ကိုက်ညီတဲ့အဖြူရောင် tees ?? ကိုက်ညီသော sTrEsS အဆင့်နှင့်အဆိုးမြင်ဝါဒ (အန္တရာယ်အရှိဆုံးရောနှောမှု⚖️☠️?) သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်အတွက်✨စပ်ဆိုီကိုက်ညီမှုရှိခြင်း ?? နေ့စဉ် ဦး နှောက်ပေါက်ကွဲမှုများကိုကိုက်ညီခြင်း our ငါတို့မျက်လုံးများနှင့်ကိုက်ညီသည့်အိတ်များ (ဆမ်သည်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်နောက်ကောက်များဖြစ်သည်။ ) နှင့်စွန့်စားခန်းအားလုံးဆင်နွှဲသည့်အချိန်တွင်ပေါ်ပေါက်လာမည့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပူဖောင်းများနှင့်ကိုက်ညီသည် ?????? ! ! ! ငါပိုင်ဆိုင်ဖူးသမျှငါ့ရဲ့လေဝိရဲ့ ze အများဆုံးဂျင်းဘောင်းဘီအတွက် @armstrongs_vrint_edinburgh သို့ ps အော်။ #shopsecondhand #ethicalfashion #opshop ✨? ✨
မျှဝေသည် ဆိုဖီ // သက်သတ်လွတ်? (@thejoyfulsprite) 7:26 pm တွင် PDT တွင်Aprပြီ ၃၊ ၂၀၁၈ တွင်
ဆမ်သည်ယောဂ၊ ခရီးသွားခြင်း၊ သူကသူ့ 40k နောက်လိုက်များအားအမှန်တကယ်အကျိုးရှိသော Instagram စာတန်းများကိုရေးသားခဲ့သည်။ လူများက၎င်းကိုလုံလောက်စွာမရနိုင်ပါ။
တစ်နေ့တာလုံးကျွန်ုပ်၏အပျော်ရွှင်ဆုံးနေရာ - နေရောင်ခြည်ထဲမှာအိုးတွေစွန့်ပစ်ခဲ့သလား။ မင်းကိုဘာတွေလုပ်ပြီးပြီ၊ ဒီနေ့မင်းကိုပျော်ရွှင်အောင်ဘာလုပ်တော့မလဲ။ ငါသိပါရေစ! ? ချစ်သူ xxx #putyourselffirst #choosehappy #selflove #findyourpassion #isupportyou #iloveyou
မျှဝေသည် ဆမ်ချတ်တို 2:38 pm တွင် PDT မှာမေလ 3, 2018 ရက်တွင် (@samchatto)
သူသည် Edinburgh တွင်နေထိုင်စဉ် ၁၈၁၆ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သောတက္ကသိုလ်၏အသက်အကြီးဆုံးဆွေးနွေးငြင်းခုံသည့်လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ဥက္ကPresident္ဌဖြစ်သည်။ အငြင်းအခုန်များကိုအနက်ရောင်လည်စည်းပွဲများတွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအကြီးတန်းအဖွဲ့ဝင်များသည်ဝတ်စုံများကိုဝတ်ဆင်ရသည်။
• Amelia Windsor နှင့်တွေ့ဆုံပါ။ Edinburgh တတိယနှစ်နှင့်တော်ဝင်မိသားစုဝင်